မျိုးချစ်စိတ် နဲ့ ရေးတဲ့ စာ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
မျိုးချစ်စိတ် နဲ့ ရေးတဲ့ စာ Author: lu bo | 8:35 PM | No မှတ်ချက် | Khun Saing မကြာခင်က မိတ်အင်မြန်မာ ( Made in Myamar ) တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ ကုတ်အင်္ဂျာီတွေကို ကုန်တိုက်တခုရဲ့ အရောင်းစင်တွေပေါ်မှာ အစီအရီ တွေ့လိုက်ရလို့
၀မ်းသာ-လှိုက်လှဲ အားရစိတ်နဲ့ တော်တော်ကြာအောင် အင်္ဂျာီတွေကို လှည့်ပတ်ကြည့်နေမိပါတယ်။ ကုန်တိုက်နံမည် က မာ့ ခ် အင် စပင်ဆာ ( Merk &
Spencer ) ။ အင်္ဂလန်မှာကော ဥရောပမှာပါ နံမည်ကြီး-ဈေးကြီးတဲ့ - ကုန်တိုက်တခုပေါ့။ ဈေးကြီးသလို ပစ္စည်း အရည်အသွေးတွေလည်း ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်( Brand) ကိုထိမ်းသိမ်းထားသမိုိ့ အင်္ဂလိပ်လူကုံတန် တွေ အသိအ မှတ်ပြု အားပေးတဲ့ တံဆိပ် -brand ဆိုတော့ ဒီ ကုတ်အင်္ဂျာီတွေ ဒို့ မြန်မာပြည်က ချုပ်နေနိုင်ပြီ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ယူကျေနပ်တဲ့စိတ်မျိုး -ပေါ်မိတာပါ။
တကယ်က ကျွန်တော် ဒီကိုရောက်နေတဲ့ ၉နှစ်လောက်အတွင်း ဗီယက်နမ် ကမ္ဘောဒီးယား ထိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရုတ် စတဲ့တိုင်းပြည်တွေက ချုပ်တယ်-လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အင်္ဂျာီတွေ အားကစားဘိနပ်တွေ ချည်း ဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်တွေမှာ တွေ့တွေ့နေခဲ့ရတော့
စိတ်ထဲ မကြည်လင်လှ ပါဘူး ။ကြည့်စမ်း။ ငါ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက ဥရောပအထိ ဈေးကွက် ရနေကြပြီ။ ထိုးဖေါက် နေကြပြီ ။ ငါတို့ မြန်မာပြည် ကနောက်ကျန်နေခဲ့တုန်း ။ ဘယ်တော့များမှ သူများတွေလိုထိုးဖေါက်လာနိုင် မလဲ။တင်သွင်းလာမလဲ။ ဘယ်တော့ နိုင်ငံတကာတော တိုး မှာလဲ ဆိုတဲ့အားမလိုအားမရ စိတ်နဲ့ စိတ်မကြည်မသာ ဖြစ်ရခြင်းမျိုးပါ။ အခုလို မထင်မှတ်ပဲ တွေ့လိုက်ရတော့ လှိုက်ကနဲဖြစ် ၀မ်းသာတဲ့အတွင်းစိတ်က မဖုံးဖိနိုင်ဘူး ။ သူ့နောက်ဆက်တွဲအဓိပ္ပါယ်တွေက အများကြီးလေ ။ ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ ဒီနံမယ်ကြီး ကုမ္ပဏီနဲ့ စာချုပ်ရတဲ့ စက်ရုံတွေ ရှိနေပြီ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေ ရောက်ပြီ -လုပ်အား ဈေးကွက်ရှာ နေပြီ။ ဖေါက်သည်ယုံကြည်မှု ( Customer confidence ) ရလာပြီ။ ဒါကြောင့်သာဒီပစ္စည်းတွေဒီကိုရောက်လာတာ။ ငါတို့ဆီကအလုပ်သမားတွေ သူများတိုင်းပြည်သွားလုပ်စရာမလို- အိုးအိမ်မကွာ-မိသားစုမဝေး- အလုပ်လုပ်နေရနေကြတော့မယ် ဆိုတဲ့ အသိ။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံမှာ လား။ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံကလား။ အောင်ဆန်း အထည်ချုပ် စက်ရုံတွေဆီကလား။ ဘယ်ကဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ ရှိတုန်း စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့တဲ့ ဒဏ်နဲ့ စက်မှုဇုံ အသီးသီးမှာ စက်ရုံတွေမလည်ပတ်နိုင်ပဲ အလုပ်သမားတွေ ထောင်သောင်း ချီပြီး အလုပ်ပြုတ်ကြ ။ ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေ့ခဲ့ရ ဖူးတယ်။ ခုတော့ ပြန်အဆင်ပြေကြပြီထင်ပါရဲ့။ လူက သူများတိုင်းပြည်ရောက်နေပေမယ့် စိတ်က အချိန်တိုင်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်လာရင် စိတ်ဝင်တစားဖြစ်မိတာ။ ( ငါတယောက်ထဲတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးလေ ) ဘီဘီစီက လွှင့်တဲ့ Travel Show အစီအစဉ် ကနေ မြန်မာပြည်အနှံ့ လိုက်ရိုက်ထားတဲ့ ရေမြေတောတောင်တွေ မြစ်တွေကန်တွေ သဘာဝ အလှအပတွေ-ဒေသအသီးသီးက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို မြင်တဲ့အခါ ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိတယ်။ ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကပါ- လို့မိတ်ဆက်ရ တဲ့အခါမျိုး -မြန်မာပြည် ရောက်ဖူးတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေက သိတ်လှတဲ့တိုင်းပြည်ပဲ လို့မှတ်ချက်ပြန်ပေး လိုက်ရင် ပီတိဖြစ်ရ တယ်။ . ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့မြို့မှာ ကျွန်တော်သိသလောက် ထိုင်းကုန်စုံဆိုင် ၃ဆိုင်လောက်ရှိတယ်။ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရှိတယ်။ လည်ပတ်နေကြပုံရတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ထိုင်းတွေက မြို့တိုင်းမှာ သူတို့တိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ ကုန်မျိုးစုံ ဆိုင်တွေ ဖွင့်နိုင်အောင် Peach ဆိုတဲ့ နံမည်တခုနဲ့ ကြိုးစားဈေးကွက်ရှာနေတာလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ကိုယ်က ငြုပ်သီးစိမ်းကြိုက်တတ်-ငပိရည်ချို ငပိထောင်းကြိုက်တတ်တော့-စားချင်ရင် သူတို့ဆိုင်တွေ သွားဝယ်ရင်းတွေ့နေတယ်။ လက် သုံးလုံးလောက်သာ အကျယ်ရှိတဲ့-လေးထောင့် အနက်ရောင်ပလပ်စတစ်ဗူးပြားပြားပါးပါးလေးထဲ ငြုပ်သီးစိမ်း လေးငါး ဆယ်တောင့် လောက်ကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်စီ ထားပြီး ပလပ်စတစ်အကြည်ပျော့ပျော့လေး ပြန်အုပ်။ Product of Thailand( ထိုင်းနိုင်ငံထွက်ကုန် ) စာတမ်းထိုး-ရောင်းတာလေး ကို မချင့်မရဲ ဖတ်ကြည့် -ပိုက်ဆံ တပေါင်ခွဲပေးဝယ်လာရတယ်။ မိုးမျှော်ငြုပ်သီးစိမ်း ၁၀တောင့် ၁၂တောင့်လောက်ကို မြန်မာငွေ ၂၅၀၀ ကျပ် လောက် နဲ့ ၀ယ်စားတဲ့သဘောပေါ့။ ဒါ-၀ယ်စားရတိုင်း ထိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာ နိုင်ကျဉ်းမိသားတစု-ဘ၀ ရပ်တည်ရေးအတွက် ထိုင်းတောင်ယာတွေဆီ ခိုးထွက်ပြီး တနေ့လုပ်ခ ဘတ် ၁၀၀လောက်ရဖို့ တနေ့ကုန်ငြုပ်သီးစိမ်းခူးခဲ့ရ တဲ့အကြောင်းပြောပြကြတာတွေ ပြန်သတိရလာတယ်။ တချို့ကပြောင်းဖူးခင်းတွေဆီ သွား ပြောင်းချိုးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ စခန်းထဲကနေအရင် ခိုးထွက်ပြီးမှ ထိုင်းတောင်ယာတွေဆီရောက်အောင် တနေ့ခရီးလောက်အထိ တောထဲ တိုး လမ်းလျှောက်ရတဲ့အကြောင်း ။ တောင်ယာတွေဆီရောက်တဲ့အခါ ဖြစ်သလို အဲဒီမှာ နေ -အိပ်-စား။ တပတ်ဆယ်ရက်နေပြီးမှ ။ တနေ့တနေ့ ငြုပ်သီးစိမ်း ကီလို ၇၀-၈၀ရတဲ့အထိ တောအဆင့်ဆင့် တိုး ခူး- ထိုင်းတောင်ယာအလုပ်ရှင်ဆီသွင်း ငွေရှာရပ်တည်တဲ့အကြောင်း ဘ၀တူနိုင်ကျဉ်းဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပြောပြကြတာတွေ။ နားထဲက မထွက်။ငါဝယ်စားနေတဲ့ ငြုပ်သီးစိမ်းလေးတွေ က မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ ထိုင်းအလုပ်ရှင်ဆီမှာ တောတိုး ခူးဆွတ်ပေးရတဲ့ ငြုတ်သီးစိမ်းတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတွေးမျိုး - မတွေးမိချင်ဘူး ။ . ဆန်စားပြီးလူဖြစ်လာတာဆိုတော့ ဂျုံစားတဲ့တိုင်းပြည်ရောက်ပေမယ့် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုခံတွင်းမတွေ့ဘူး။ ထမင်းမစားရရင် ဗိုက်မ၀သလိုပဲ။ စိတ်အဆာမပြေဘူး။ ဒါနဲ့ ဆန်ပဲ အဓိက-စားဖြစ်တယ်။ ရောက်စ က ဟိုဆန်ဒီဆန် စမ်းစားကြည့်တယ်။ နောက်တော့ အိန္ဒိယ ဘာစမာတီဆန် ဒါမှမဟုတ် ထိုင်းက ခေါမလိဆန်
က မြန်မာပြည်ကဆန်မျိုးနဲ့နီးစပ်တယ်။ နူးညံ့တာ။မွှေးတာ။ ဆန်လုံးချောတာ ။ဒါနဲ့ ခုတော့ သူတို့ကိုပဲ စားဖြစ်နေတော့တယ်။ တက်စကို ဆိုတဲ့ အမေရိကန် စူပါကုန်တိုက်ကြီးတွေဆီကတဆင့်-၀ယ်စားရတာပေါ့ဗျာ။ မကြာခင်က ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းက မြန်မာပြည်ထွက်အဖြစ် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ မှတ်ပုံတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတက်လာတော့ အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ မြန်မြန် ဈေးကွက်ရပါစေ။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်အရည်အသွေးတွေကို ရေရှည်ထိမ်းသိမ်း နိုင်ငံအနှံ့အောင်မြင်အောင်စိုက်လို့ နိုင်ငံတကာထိုးဖေါက်နိုင်ပါစေ။ပိုးသတ်ဆေးကင်း-ခဲသလဲ အမှိုက်အကျိုးအကျေတွေကင်းတဲ့အရည်အသွေးမျိုးတွေနဲ့ပေါ့။ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်တာ အကျင့်ပါနေလို့- မြန်မာ့ပေါ်ဆန်း ကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည်-ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ထောင်ချင်လည်းထောင်ကြပေါ့။ ဒါက လယ်သမားတွေဘ၀ကို ပြောင်းလဲ မြှင့်တင်စေမယ့်ကိစ္စ မို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသေးတယ်။ . မြန်မာပြည်ဆိုတာ ကျွန်းနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလန်ထက် မြေ ၅ဆ ကျယ်တယ်။နွေမိုးဆောင်း သုံးရာသီ ရှိတယ်။သိမ်းမြစ်လို ကြီးတဲ့ ကျယ်တဲ့ မြစ်လေးစင်းမက ပိုင်တယ်။ မိုင်တထောင်ကျော်တဲ့ ပင်လယ် ကမ်းခြေကို ပိုင်တယ်။ မြစ်ချောင်းတွေတောတောင်တွေမြေပြန့်တွေ နဲ့ တနှစ်လုံးစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့မြေယာတွေ ရှိတယ်။ လေယာဉ်ပျံ ဒုံးပျံ မော်တော်ကား- ကွန်ပျူတာတွေ လုပ်တဲ့နည်းပညာ ငွေကြေးဓန မပြည့်စုံပေမယ့် ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာ တွေလုပ်- ကျွန်တော်တို့အားသားချက်တွေနဲ့ ထိုးဖေါက်ကြရမှာပါ။ အလုပ်လုပ်ကြရမှာပါ ဘိုးဘွားအမွေဆိုပြီး မြစ်တွေပိတ် --တောတွေရှင်း -တောင်တွေလှန်- သယံဇာတ တွေ အကုန်တူး-အကုန်ခုတ်- တဆုံးနှိုက် -ရောင်းထုတ်နေလို့တော့ မဖြစ်ဘူး။ မြေ ကို စနစ်တကျ အသုံးချနိုင်တဲ့တနေ့ -ဈေးရောင်းတတ်တဲ့နေ့- ဈေးကွက် ရှာနိုင်တဲ့တနေ့ ဆင်းရဲတွင်းက ရုန်းထွက်နိုင်ကြမှာပါ။ ဈေးရောင်းတတ်တဲ့လူမျိုး ကြီးပွါး။ အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေတဲ့လူမျိုး-ဆင်းရဲမွဲတေဒုက္ခရောက်။ ဒါ -ကမ္ဘာ့နိယာမ- မဟုတ်လား။ . သူများတွေက အုန်းရေ ကိုဗူးသွတ်ရောင်းနိုင်ရင် ငါတို့
ဘာလို့ မရောင်းနိုင်ရမှာလဲ။ မြန်မာပြည်က သရက်သီးတွေ ငှက်ပျောသီးတွေက အခု ကျွန်တော်တို့ ဒီက ကုန်တိုက်တွေမှာ ၀ယ်စားနေရတဲ့ သရက်သီး ငှက်ပျောသီးတွေထက်
အနံ့ အရသာ အကုန်ယှဉ်နိုင်တယ်။ သာတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီမှာ မဲဇလီဖူးတွေကို ပုလင်းသွတ်ပြီး ထိုင်းတွေရောင်းနေပြီ။ ကန်စွန်းရွက် ဆူးပုတ်ရွက် စပါးလင် ငှက်ပျောဖက် ဆိုတာ တွေကအစ ဒီအထိရောက်လာနေတယ်။ ဈေးကြီးမှကြီး ။မျှစ်နုနု။ပြောင်းဖူးနုနုလေးတွေ ကိုလည်း ဗူးသွတ်ကြသေးတယ်။
ဈေးကွက်ရှိတယ်။ မျှစ်ချဉ်က တရုတ်ဆိုင်တွေမှာ အထုတ်လိုက်ဝယ်လို့ရတယ်။ ဖရဲသီး-နာနတ်သီး-ပြောင်းဖူးတွေ လည်းရောင်းနေကြတာပဲ။ . ခွန်ဆိုင်း ( ၂၅-၇-၂၀၁၆ )